Rivet Nut Factory - China Rivet Nut Abakhiqizi, abahlinzeki
Umzimba Ojikelezayo we-Head Rivet Nut
It is kabanzi embuthanweni imikhiqizo electromechanical futhi ukukhanya ezimbonini ezifana imoto, zezindiza, ifriji, ikheshi, switch, insimbi, ifenisha kanye umhlobiso.
I-M4 Countersunk Head Rivet Nut
Ifanele izinto eziwugqinsi nezinzima.
Insimbi eyakhiwe eyimpumputhe i-rivet hemlock hlobo
I-rivet yesakhiwo inamandla amakhulu, futhi ingqikithi ye-rivet ikhiyiwe emzimbeni we-rivet ngemuva kwe-riveting.
I-Lantern rivet eyimpumputhe
Izinto: I-aluminium ephelele
I-rivet eyimpumputhe engenamanzi
Csk ikhanda le-aluminium blind rivets
Inhloko ye-countersunk kanye ne-120 countersunk head rivets isetshenziselwa kakhulu izikhathi zokuphithizela ezinobuso obushelelezi nomthwalo omncane.
Zisetshenziswa emkhakheni wokuqinisa amapuleti wensimbi ahlukahlukene, amapayipi nezinye izimboni zokukhiqiza. Akudingi ukuthinta imicu yangaphakathi, amantongomane okushisela, i-riveting eqinile, ukusebenza kahle okuphezulu nokusetshenziswa okulula.
Vula ama-Rivets Blind Rip nge-Break Pull Mandrel
Izinzuzo zama-rivets avulekile:
Kukhuphuka izindleko eziqinile, eziphansi
Ibanga lesicelo elibanzi
I-M12 Countersunk Head Rivet Nut
Isetshenziswa emkhakheni wokuqinisa amapuleti wensimbi ahlukahlukene, amapayipi nezinye izimboni zokukhiqiza.
I-CSK Open End Rivet Nut encane
I-YUKE inguMkhiqizi wefektri oyiChina osezingeni eliphezulu futhi unikezela ngeRivet Nut ehlukahlukene.
Uhla lwethu olubanzi lwe-Steel Round Body Countersunk Knurled Rivet Nuts luphelele ezinhlotsheni ezahlukahlukene zezicelo.
I-Rivet nut ingafaka ipuleti elincanyana okunzima ukufakwa emaceleni, ipuleti lensimbi elicutshungulwe kube nzima ukufakwa ipayipi, insimbi eqine kakhulu, insimbi engeyona yensimbi nomkhiqizo we-resin.
Imisebenzi: inikeza indlela esebenza kahle, engabizi kakhulu yokubeka imicu ehlala njalo neyokubamba ezintweni ezincane, Ikakhulukazi efanele ukusetshenziswa ezintweni ezincanyana kakhulu ukwamukela intambo evunyelwe.
Le Nutsert inika amandla akhuphukile emigodini efinyeziwe futhi eboshiwe.Umzimba onamafutha unikeza ukumelana okuphezulu kokuphuma lapho kufakwe ezintweni ezithambile.
Sakha futhi sakha amantongomane e-rivet ukuhlangabezana nezidingo zanoma yisiphi isicelo. Onjiniyela be-R & D bethu abangaphakathi nokusekelwa kokuthengisa kwezobuchwepheshe balwela ukukhiqiza imikhiqizo ehamba phambili yezidingo zakho ezithile.
Inhloko ye-CSK evulekile yokuphela kwe-rivet nut Ilungele izinto ezinzima, njengoba indawo ekhulayo ethwala ikhulisa ukumelana ne-torque, Ifanele ukusetshenziswa emigodini ebunjiwe noma ebunjiwe.